किशोरावस्थामा स्वस्थ कसरी रहने ? – Health Post Nepal
किशोरावस्थामा स्वस्थ कसरी रहने ?
२०७५ कार्तिक ३ गते १९:१९
सुरक्षित छ आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की ?
अधिकांश लेखमा किशोरी स्वास्थ्यबारे चर्चा गरिन्छ । तर, किशोरावस्थामा किशोर–किशोरी दुवैमा स्वास्थ्य चेतना हुनु जरुरी छ । किशोरावस्थाको स्वास्थ्यले बाँकी उमेर पनि स्वस्थ रहन सघाउँछ । किशोरावस्थामा स्वस्थ रहने केही सहज उपाय–
१. स्वस्थ, सन्तुलित र पर्याप्त खाना खानुहोस्
किशोरावस्थामा स्वस्थ हुनका लागि स्वस्थ खाना खानु जरुरी छ । आफ्नो शरीर र काम हेरेर ३ पटक पूर्ण खाना र ५–६ पटक आंशिक खाना खानुहोस् । कहिल्यै खान नछोडनुहोस् । तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ खाना छनोट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि आइसक्रिमको साटो चिसो दही रोज्नुहोस्, चिप्सको साटो स्याउको चाना रोज्नुहोस् । त्यस्तै, प्रशस्त पानी पिउनुहोस् । जति बढी पानी पिउनुहुन्छ, त्यति नै स्वस्थ रहनुहुनेछ । पानीले शरीरको टक्सिनलाई बाहिर निकाली छालालाई स्वस्थ तथा चम्किलो बनाउन सघाउँछ ।
२. शारीरिक व्यायाम सुरु गर्नुहोस्
वास्तवमा ३० वा ४० पछि मात्र शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ । किशोरावस्थाबाटै सातामा ५ वा ६ दिन शारीरिक व्यायाम जरुरी छ । यसका लागि नजिकैको जिम सेन्टर वा स्विमिङ पुल रोज्न सक्नुहुन्छ ।
शारीरिक गतिविधिले मसलहरू तन्काएर बलियो र स्वस्थ बनाउनुका साथै खुसी प्रदान गर्छ ।
३. पूर्ण निद्रा सुत्नुहोस्
स्वास्थ्यका लागि पूर्ण निद्रा अत्यन्तै आवश्यक छ । पक्कै पनि तपाईं यदि रात अबेरसम्म मोबाइलमा साथीसँग च्याट गरेर बस्नुभयो भने दिनभर असहज महसुस हुन्छ ।
किशोरावस्थामा ८ घण्टा निदाउनु अनिवार्य छ । सप्ताहान्तमा होस् या लामो होलिडे, एकै समयमा उठ्ने तालिकाको अनुसरण गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई एकाग्र हुन सघाउँछ, साथै मित्रवत् व्यवहार गर्न र खुसी रहन मद्दत गर्छ । त्यसैले उही समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी पार्नुहोस् ।
४. सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनुहोस्
– प्रत्येक दिन नुहाउनुहोस् ।
– हरेक दिन आफ्ना अन्तर्वस्त्र परिवर्तन गर्नुहोस् ।
– कम्तीमा दुईपटकभन्दा बढी फेसवासले मुख नधुनुहोस् । मुख धुँदा नरगड्नुहोस्, बिस्तारै सर्कुलर मोसनमा धुनुहोस् ।
– अनुहारमा डन्डिफोर छ भने कहिल्यै हातले नफुटाउनुहोस्, यसले संक्रमण फैलाउँछ र डन्डिफोर अनुहारभर फैलाउँछ । हातले अनुहार छोइरहने बानी पनि त्याग्नुहोस् ।
– सुत्नुअघि सधैँ मेकअप धुनुहोस् ।
५. कपाल धुनुहोस्
अहिले धेरै युवा दिनहुँ कपाल धुन्छन्, जसले कपाल सुक्खा हुनुका साथै टुक्रिने गर्छ । हप्तामा २ वा ३ पटकभन्दा बढी स्याम्पु प्रयोग नगर्नुहोस् ।
६. साथीसँग घुमफिर गर्नुहोस् ।
किशोरावस्थामा साथी छनोटमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । थोरै र अत्यन्तै मिल्ने साथी बनाउनु र कहिलेकाहीँ घुम्नु आवश्यक छ ।
Tags: किशोर–किशोरी, किशोरावस्था